काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले आज बारामा निमार्णाधीन विमानस्थलमा निर्माण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी...
काठमाडाैं । तपाईँ दैनिक रुपमा गर्भनिरोधक चक्की खाएर दिक्क हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस् । वैज्ञानिकहरूले एक महिनामा एक पटक एक चक्की खाँदा महिनाभरी ढुक्क हुन सक्ने औषधि पत्ता लगाएका छन् । यौ औषधि हाल सुँगुरमा परीक्षण गरे पनि मा...
चाँगुनारायण नगरपालिकाको नगरकोट फेदीमा ५२ घर रहेको बस्तीलाई नमूनाबस्ती घोषणा गरिएको छ । नमूना बस्तीको आज नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले उद्घाटन गर्नुभयो । नगरकोटका बस्तीलाई नमूनाबस्ती बनाउने र घरवाससमेतको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ...
काठमाडाैं । कानुन नागरिक समाजलाई सुरक्षित, अनुशासित र मर्यादित बनाउनका लागि आउने हो । तर, गत वर्ष जारी अपराध संहिताको दफा २१९ ले रिस उठेको मान्छेलाई सताउने मेलो खोलेको छ । मन मिलुन्जेल प्रेम मन भाँचिएपछि ‘जबर्जस्ती करणी...
भरतपुर महानगरपालिका–१ पोखरा बसपार्कमा किराना व्यवसाय गर्दै आउनुभएका न्यून दृष्टियुक्त पर्शुराम पौडेलले राज्यले अवसर नदिए पनि आफैँ व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बनेको बताउनुहुन्छ । उहाँले विसं २०६० देखि भाडामा सटर लिएर व्यवसा...
निरन्तर रक्तश्राव हुँदा जाजरकोटमा आठ जना गर्भवतीको उद्धार
काठमाडाैं । सुत्केरी ब्यथा लागेर निरन्तर रक्तश्राव हुन थालेपछि जुनीचाँदे गाउँपालिका–२ जाजरकोटकी ३१ वर्षीय कमला तिरुवालाई हेलिकप्टरबाट आज उद्धार गरिएको छ । पुसको पहिलो हप्तामात्र सुत्केरी हुने मिति भएको बताउने उहाँलाई सोमबा...
जीर्णोद्धार नहुँदा महाकालीको बगरमा पुरिँदै मुख्य सीमास्तम्भ
चार वर्षअघि महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण ढलेको मुख्य स्मास्तम्भ जीर्णोद्धार नहुँदा बगरमा पुरिँदै गएको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ खल्लामसेटी क्षेत्रमा पर्ने महाकाली नदीको बगरमा रहेको नेपाल–भारत मुख्य सीमास्तम्भ न...
पातलो ज्यान। ख्याउटो मुहार। रातो कुर्ता सुरुवालमा थिइन् उनी। घट्दो दिनसँगै चढ्दो चिसोले होला दिउँसै काठमाडौंको जाडो छल्न स्विटर लगाएकी थिइन्। मलाई देखेपछि उनी असजिलो मान्दै नजिक आइन् र कुर्सीमा बसिन्। उनी कलिलैमा भारतको दिल्लीको...
सडकमै रात काट्ने र ढलमा फालिएको फोहर खाने बेवारिसेलाई आश्रमको राहत
सडकमै रात काट्ने र ढलमा फालिएको फोहर खाना खाएर छाक टार्ने मखमली तामाङका केही समयअघिका दिन कहाली लाग्दा थिए । घाम, पानी, हावाहुरी झरीको पर्वाह नगरी सडकमै कठिन र सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताउनु उहाँको बाध्यता थियो । सडकमा बस्नेलाई ...
उपत्यकामा वातावरण प्रदूषण कम गर्ने उपाय पशुको लादी व्यवस्थापन 'बायोग्यास'
मासुका लागि प्रयोग गरिने जनावरबाट निस्कने दिसाजन्य फोहरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्न सके काठमाडौँ उपत्यकामा वातावरण प्रदूषण कम गर्न सकिने विज्ञको सुझाव छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रदूषण पार्ने तत्वमध्ये मासुजन्य वस्तुबाट निस्कने फोहर पनि मु...
ढल निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारी कसको हो ? स्थानीय सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा खानेपानी मन्त्रालय ? यो कुरामा स्थानीयवासी मात्रै होइन स्वयं सेवा प्रदायक संस्थासमेत जानकार छैनन् । नेपाल सर...
सिद्धबाबा नाम सुन्ने वित्तिकै बुटवल, पाल्पा, स्याङ्जा र गुल्मीका जनताले लामो स्वास फेर्छन् । वर्षा शुरु भएपछि त्यस सडकखण्ड भएर यात्रा नै गर्नु नपरोस् भन्ने ती जिल्लाका बासिन्दाको मनमा राम्रैगरी पर्छ । उपाय पनि थिएन । “पहिरो...
घरको सुख-समृद्धिका लागि बिहान गर्नुहोस् यी काम
एजेन्सी । पति पत्नीबीच तालमेलमा कमि भयो भने घरमा अशान्ति बढ्दै जान्छ। कहिले काही नचाहादानचाहदै सानो सानो कुरामा पति पत्नीबीच झगडा हुने गर्दछ। सानो सानो मन मुटावले गर्दा सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ। भारतका एक एस्ट्रोलोजर डा दीक्षा राठीक...
गढीमाइ मेलाको अवसरमा भोली सार्वजनिक बिदा
काठमाडौँ । सरकारले मंगलवार सार्वजनिक विदा दिएको छ । बारा जिल्लास्थित प्रसिद्व गढीमाइको पञ्चबर्षीय मेलाको अवसर पारेर मंगलबार बिदा दिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ । गत मंसिर ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मंगलबार...
बाँके। न्यूरोडमा सामान किन्दै गर्नुभएका बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका–५ का मनबहादुर भण्डारीलाई पिसाब लाग्यो, न शहरमा चिनेजानेको पसल छ, न त कोही आफन्त नै छ । उहाँ हतारमा एउटा चिया पसलमा छिर्नुभयो । साहुजीलाई चिया पकाउन अ¥...
अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग भइरहँदा सुस्ताको समस्या ओझेलमा
काठमाडाैँ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताको पहल गर्न सुस्तावासीले माग गरेका छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरामा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग भइरहँदा सुस्ताको समस्या ओझेलमा परेको उनीहरुको गुनासो छ । सरकार...
बहुमूल्य सालक सिरहामा भेटियो
सिरहा । सिरहाको सुखीपुरमा फेला परेको मध्यपहाडी क्षेत्रमा मात्र पाइने अनौठो जनावर सालक वन कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ । सुखीपुर नगरपालिका–१० निवासी कारी साहको करेसाबारीमा बिहीबार साँझ फेला परेको सालक डिभिजन वन कार्यालय ...
नागरिक उड्यन प्राधिकरण भरतपुरले धावनमार्ग मर्मतसम्भार गर्न १० दिन हवाई सेवा रोक्ने भएको छ । यही मङ्सिर १५ देखि २४ गतेसम्म हवाई सेवा रोकेर काम गर्न लागिएको हो । कार्यालय प्रमुख पवनकुमार गौतमका अनुसार धावनमार्ग ओभरले तथा पार्किङ विस्त...
झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा हात्तीको आक्रमणमा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ । वडा नं ७ का ५५ वर्षीय काया राय क्षेत्रीको गएराति हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ...
मादकपदार्थ सेवन गर्न हतियारसहित यहाँ आएका भारतीय नागरिकलाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलाशले भारत बिहारको सुपौल जिल्ला डगमाराग्राम पञ्चायत १२ कुनौली थाना सोनापुर बस्ने २२ वर्षीय रमे...